joomla စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်း ရေးဆွဲနည်း - MYSTERY ZILLION
joomla စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်း ရေးဆွဲနည်း
November 2009 edited November 2009 in Joomla
ကျွန်တော် Modx cms သုံးတော့ ဒီဇို်င်းနာက စိတ်ကြိုက်ဘယ်လိုပဲဆွဲဆွဲ modx cms က လို်က်ပြီး ရေးလို့ရပါတယ်
joomla မှာကျတော့ သူ့ template အတိုင်း ကြီးပဲ banner တို့ background တို့လောက်ပဲလိိုက်ချိန်းနေရသလိုဖြစ်နေတယ်
သူ module အလိုက် template မှာ echo ထုတ်တာတွေကိုတော့ ဗိုလ်စေ ကျွန်တော့ကို ပေးထားတဲ့ joomla 1.5 စာအုပ်မှာ ဒီလိုလေးတွေတွေ့တယ်
Here are the most common jdoc position names:
banner breadcrumbs debug footer hornav left right search syndicate top user1
user2 user3 user4 user5b user6 user7 user8 user9
ဆို်လိုချင်တာက စိတ်ကြိုက် ဒီဇို်င်းတစ်ခုကို css ရေးပြီး အဲဒါတွေကို echo လိုက်ထုတ်ရုံနဲ့ အဆင်ပြေနိုင်သလား ဆိုတာကိုပါ . wordpress မှာတော့လုပ်ဖူးတယ် ရတာလဲရှိတယ်မရတာလဲရှိတယ်
modx ကတော့ အကောင်းဆုံးပဲ ဘာလာလာရတယ် ဒီမှာ joomla အရမ်းတော်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်
ကိုယ့်ဘာသာဒီဇိုင်းထုတ် html css ရေး ပြီးတော့ joomla template လုပ် ၊ အဲဒီလို ရေးဖူးတဲ့သူတွေရှိရင် ၀င်ဆွေးနွေးပေးကြပါ
ရတယ်ဗျ .. အခု စာမျက်နှာ ၅၂ အထိဖတ်အပြီးမှာတော့ တော်တော် သဘောပေါက်လာပြီ
ဟီးဟီး ဗိုလ်စေ ပေးထားတဲ့ စာအုပ်လေး လိုချင်ရင်တော့ ဟောဒီမှာ လင့် ပါဗျာ
Joomla တော့ မသိဘူး။ ကျွန်တော်က wordpress လိုင်းဆိုတော့ wordpress ပဲသိတယ်။ wordpress က ပိုပြီး documentation ပြည့်စုံသလိုပဲ။ wordpress.org မှာ အကုန်ရှင်းပြထားတယ်။ လာတဲ့ HTML Design တွေအကုန် wordpress ပြောင်းလိုက်ဖို့က သိပ်မခက်ဘူးဗျ။ Joomla ကတော့ ကျွန်တော် စမ်းဘူးတယ်။ 1.0 က template လုပ်ရတာလွယ်ပေမယ့် 1.5 က နည်းနည်းရှုပ်ထွေးသွားလို့ ဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။
ဟုတ်တယ် အခု ပါရာစီတမောလ်သောက်နေရပြီ .. သေချင်စော်နံတယ်ဗျာ ဟားဟား
ဗိုလ်စေ ပေးတဲ့ စာအုပ်က တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ် ကျေးဇူးဗျာ လေ့လာနေတုန်းပဲ ရတော့၇နေပါပြီ ..
ကျွန်တော်သိသလောက်လေးပြောပြမယ်။ ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ သဘောတရားကတော့ 1.0 base ပါ။
1) ကိုယ်လုပ်တဲ့ Template တဲ့တစ်ခု အတွက် index.php ဆိုတဲ့ file ကနေပြီး module position တွေကို control လုပ်ပါတယ်။ module position ဆိုတာကတော့ module တွေကို ဘယ်လိုပြမယ်ဆိုတဲ့ layout ကိုပြောတာပါ။ For eg; Template တိုင်းမှာ user1, user2, user3 စတဲ့ module position တွေသည် index.php ကပဲ control လုပ်ပါတယ်။ ကိုယ်က position တစ်ခုထပ်တိုးချင် တယ်ဆိုရင်လည်း index.php ထဲမှာပဲ edit လုပ်ပါတယ်။
2) Template ထဲမှာ သုံးထားတဲ့ css,js,images တွေက standard အရ css, js, images စတဲ့ သီးခြား folder တစ်ခုဆီ အနေနဲ့ ရှိနေပါတယ်။
3) ဒါအပြင် template ထဲမှာ တစ်ခြား php file တွေလည်းရှိတဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ file တွေကတော့ template ထဲက menu တွေကို control လုပ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ template တစ်ခုကို အစအဆုံး မရေးဘူးပါဘူး။ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ အနီးစပ်ဆုံး template တစ်ခုကိုလိုက်ရှာပြီး customize လုပ်ပါတယ်။ အဲလိုလုပ်တဲ့ အခါ အပေါ်ကပြောတဲ့ ၃ ချက်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး စဉ်းစားပါတယ်။
နည်းနည်းလေးတော့ နားလည်လာပြီ။ ဒါနဲ့ ကိုZack က ကျွန်တော့်လိုပဲ.. ကိုယ်နဲ့တော်မယ်လို့ ထင်တဲ့ အကျင်္ီကို ပြန်ပြင်ချုပ်ဝတ်တယ်ပေါ့.. :P
Did two Joomla sites. Templates were designed and coded from the scratch. That was about three years ago, I guess.
အဲဒီလို ရှာပြီး customize လုပ်ရင် design by ဘယ်သူဆိုပြီး သူ့မူရင်းပိုင်ရှင် နာမည်ထည့်ပေးရမှာပေါ့
ကျွန်တော်လဲ အခု အဲဒီလိုလုပ်မှရမလိုဖြစ်နေတယ်ဗျာ .. ဒါပေမယ့် design by ကိုယ်ကုမ္ပဏီနာမည်ထည့်မှ image တက်မှာဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်ရေးနေရတယ် စိတ်ညစ်တယ် အချိန်ပေးရတယ်ဗျာ
ကို zack , pm ကနေ ကျေးဇူုးတင်ကြောင်းမပြောချင်လို့ ဒီကနေပဲ အားလုံးသိအောင် ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါတယ် မနေ့က ကျွန်တော် မေး တဲ့ joomla custom module လေးအကြောင်း ကို ပြန်ဖြေပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ
Hi friends....... I would like to have this e-book, but E-book link above mention already expired. If anyone upload this e-book, I would be very grateful to him/her. Thanks...
Joomla, Wordpress, Drupal ၊ တစ်ခုမှ theme မရေးဘူးသေးတဲ့ Web Designer တစ်ယောက်အတွက် ဘယ်ဟာက theme ရေးရတာ အလွယ်ဆုံးလဲဗျ ။
ကျတော့် အထင်တော့ wordpress က ပိုးပြီးလွယ်မယ်လိုထင်ပါတယ်။ ပိုပြီးတော့ Straight Forward ဖြစ်ပါတယ်။ Joomla က နဲနဲ့ ရှုတ်တယ်။ စလုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ ကိုယ်လိုအပ်ချက်နဲ့ အနီစပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ template ကို ရှာပြီး customize လုပ်ကြည့်ရင် ပို အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာတော့ ကိုယ်လုပ့်မယ်ဟာ ပေါ မှာ မှုတည် ပြီး ဆုံးတော့ ဆုံဖြတ်စေချင်ပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ site ဘာ တွေလိုအပ်မလဲ ဆိုတာ ကို အရင်ကြည့်ပါ၊ ဥပမာ user level, shopping cart တို့ပေါ့ ။ ဘယ် cms မှာ ဘာ module တွေ ရှိလဲ ဆိုတာ ကို အရင်ကြည့်ပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်။
You can use artisteer software to make joomla, durpal or wordpress templates easily and you can customize whatever you like. I make my joomla templates with it.
joomla ကို Designer တွေနဲ့ Developer တွေ အနှစ်သက်ဆုံး ဖြစ်နေတယ်လို့ လေ့လာမိပါတယ်။ emo ပေးထားတဲ့ စာအုပ် မရှိတော့ဘူး ရှိသေးတဲ့သူမျှဝေပါဦးဗျာ အရေးပေါ် အလျော်ပေး လိုအပ်နေလို့ပါ။ section တွေ category တွေ Module တွေ plugin တွေကြားမှာ ပိတ်မိနေလို့ပါ။ :-S
http://www.megaupload.com/?d=YB8ZPA99 (ebook download link)
http://www.multiupload.com/JI1W3468S6 (It has many download link).
Download link is already dead . plz ! try another link . thz !!!!
လွယ်သယောင်နဲ့ ခက်လှတယ် ... ဝူး